सात वर्षिय बालक, जसले एक वर्षमा २ अर्ब ४७ करोड कमाए ! – Everest Dainik – News from Nepal
सात वर्षिय बालक, जसले एक वर्षमा २ अर्ब ४७ करोड कमाए !
बीबीसी । रेयान नामका सात वर्षे बालक युट्युबमा खेलौनाको रिभ्यु गर्छन् र यसको बदलामा उनका आमा–बुवाले राम्रो पैसा कमाइरहेका छन् ।
रेयानले गत वर्ष ११ मिलियन डलरको कमाई गरेका थिए जुन अहिले बढेर २२ मिलियन डलर (दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) भएको छ ।युट्युबमा रेयानको भिडियो करोडौंले हेर्छन् । रेयान ट्वेजरिभ्यु नामबाट एउटा युट्युब च्यानल चलाउँछन् ।
यो युट्युब च्यानलमार्फत रेयान आफ्ना दर्शकलाई खेलौनाको दुनियाँमा लैजान्छन् । फोर्ब्स म्यागजिनले उनलाई सन् २०१७ मा संसारको सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पाउने सेलिब्रिटीको सूचीमा राखेको थियो ।
सन् २०१छ मा सुरु भएको रेयान ट्वेजरिभ्युको भिडियोलाई अहिलेसम्म १६ अर्ब बढीले हेरिसकेका छन् । तर यति चर्चित हुँदा पनि रेयानबारे संसारलाई त्यति धेरै जानकारी छैन । उनी अमेरिकी हुन् भन्ने मात्र जानकारी उपलब्ध छ ।
ट्याग्स: ryan rich child